RAHAJASON HARRY LAURENT : « Manosika any amin’ny fisaraham-bazana ny Praiminsitra Omer Beriziky »
Manoloana ny fanambarana izay nataon’ny Praiminisitra Omer Beriziky, nandritra ny fahatongavany teny Ivato, dia naneho ny heviny mikasika izany, ny Minisitry ny Serasera Rahajason Harry Laurent, izay nahazo fanakianana manokana tamin’ny Praiminisitra. 4 février 2013
Nanao valy bontana ny minisitry ny Serasera, raha niditra mivantana tao amin’ny Radio Viva, omaly antoandro. Anisan’ny nasiany teny ny mikasika ny raharaha anatiny eo anivon’ny Governemanta sy ny mikasika ireo haino aman-jery nakatona ary ny fanoheran’ny Omer B eriziky ny Filoha Rajoelina. « Manosika any amin’ny fisaraham-bazana ny Praiminisitra Beriziky, amin’ireo teny fanakianany tsy amim-piheverena izay ataony amin’ny haino aman-jery etsy sy eroa », hoy ny minisitry ny Serasera.
Vaky tanteraka ny ady eo amin’ny minisitry ny Serasera sy ny Praiminisitry ny fampihavanam-pirenena. Namaly bontana ny minisitra fa Ingahy Praiminisitra no tena fositra amin’ny tsy fandehanan’ny raharaham-pirenena, indrindra ny tsy fisian’ny firaisan-tsaina eo amin’ny mpikambana eo anivon’ny Governemanta. Nambaran’ny minisitry ny serasera omaly nandritra ny fidirany mivantana tao amin’ny Radio Viva Antananarivo izany.
Mitarika ny olona hanao zavatra tsy ara-dalàna
Nambaran’ny minisitra Rahajason Harry Laurent fa mifanohitra hatrany ny teny ambaran’ny Praiminisitra Omer Beriziky mikasika ny fanakantonana ireo haino aman-jery. Efa nambrana’ity farany fa tsy azo ekena ny tsy fanarahan-dalàna, indrindra eo amin’ireo haino aman-jery. « Nisy nitsikera tao amin’ny haino aman-jery tsy miankina iray tany amin’ny faritra ny Praiminisitra. Rehefa nojerena ny mikasika ilay haino aman-jery dia tsy manaraka ny fenitra sy tsy manara-dalàna ka nasiany nakatona.
Nahagaga anefa dia nandritra ny kabariny teny Iavoloha tamin’ny fifampiharahabana tratry ny taona dia izy indray no sahy niteny ny tokony hamahana ireo haino aman-jery nakatona ireo », hoy ny minisitra.
« Mazava izany fa manosika ny hanao zavatra tsy ara-dalàna indray ny Praiminisitra amin’izao fotoana izao. Anisan’ny fampisaraham-bazana ny vahoaka malagasy izany ary fanoherana tsotra izao ny lalana manan-kery », hoy ihany izy.
Tsy fanatrehena ny Filankevitry ny minisitra
Manoloana ny fanazavan’ny Praiminisitra fa tsy mba manatrika ny Filankevitry ny minisitra ny minisitry ny Serasera dia nanamarina ny ity farany fa tsy mitombina izany « Manana taratasy mazava amin’ny tsy fanatrehako ny Filankevitry ny minisitra aho satria manao iraka hafa. Azo hamarinina izany », hoy Rahajason harry Laurent. Ankoatra izay dia nahitsy ny fanazavany fa amin’izao fandrosoan’ny teknolojia izao dia afaka manaraka ny Filankevitry ny minisitra izy na dia tsy manatrika aza.
Tetsy an-kilany ihany koa dia nilaza ny minisitra fa tsy marina ny filazana fa notapahina ny tenin’ny Praiminisitra tao amin’ny Rnm. « Tsy manan-jo hanao izany aho », hoy Rahajason Harry Laurent. Tokony hazava amin’ny Praiminisitra fa misy lalàna mifehy sy manaraka ny drafitra izay ananany ny radio sy ny telem-panjakana ka afaka manao izay tiany atao ny tompon’andraikim-panjakana ambony. Mikasika izay ihany dia nambaran’ny minisitra fa afaka miteny ao amin’ny Rnm sy Tvm avokoa ny rehetra ankoatry ny fanalana baraka sy fihantsiana izay mety hitarika ny olona amin’ny lalan-diso.
« Ny fanehoan-kevitra manohitra amin’ny soatoavina sy tsy mitondra amin’ny fanavaozana dia eny amin’ny toeran-kafa toy ny ao amin’ny Magro nofanaovana izany », hoy ny minisitra.
Afaka mirehareha ny haino aman-jerim-panjakana
« Tao anatin’ny 53 taona dia tsy afaka mivelatra amin’ny toerana tokony hisy azy ny TVM sy Rnm. Amin’izao fotoana izao, indrindra hatramin’ny naha minsitry ny Serasera ny tenako, dia afaka mirehareha aho satria any amin’ireo Distrika 119, dia ny 110 no manana ny trano fiasany manokana ho azy. Ny 90 dia efa misy fitaovana arifomba sy manara-penitra afaka mifaninana amin’ny hafa », hoy ihany ny minisitra
Manana adidy ka tsy maintsy mijoro
Amin’izao fanomanana ny fifidianana izao dia mahatsiaro ho manana adidy lehibe ny minisitry ny Serasera. Tokony hijoro amin’ny fanatanterahana izany ihany koa izay mahatsiaro ho tompon’andraikitra ka hanambara izay tsy fahatomombanana. Anisan’ny nasian’ny minisitra tsikera ny Praiminsitra ihany koa izany omaly. « Maika ny fanomanana sy ny fandinihana ireo tolo-dalàna mikasika ny fifidianana. Tsy manana izay fomba fijery izay anefa ny Praiminisitra ka naleony nanatrika ny fanolorana fitaovana tany Sava toy izay handinika io lalàna io », hoy izy nahitsy.
Nomarihiny fa amin’ny 8 febroary izao anefa no tokony hiantsona ny vahoaka malagasy hifidy. Tsy mbola vonona anefa ny mikasika izany noho ny tsy fandraisan’ny Praiminisitra Omer Beriziky ny andraikiny izay tokony hataony. « Ny manohitra ny Filohan’ny tetezamita Rajoelina Andry hatrany no ataony », hoy izy. Mikasika izay indrindra dia hitam-poko hitam-pirenena fa tsy mba nanatrika ny fanokanana ireny zava-bita ho an’ny taranaka fara aman-dimby ireny toy ny hopitaly manara-penitra sy ny zavatra maro hafa ny Praiminisitra. « Tokony ho fantany anefa fa ny Filohan’ny tetezamita Rajoelina Andry no antom-pisiany », hoy hatrany ny minisitry ny Serasera.
Nangonin’i Tiaray R